Ukuphawula kanye ne-Iconography kwezepolitiki | Martech Zone
Ukuphawula kanye ne-Iconography kwezepolitiki
NgoLwesihlanu, January 15, 2010 NgoLwesine, July 2, 2015 Douglas Karr
Angihambisani neze nombono othile wezepolitiki. Ngokusobala lena yividiyo eyenziwe yinhlangano edla ngoludala, engikholelwa ukuthi, yenza ihaba ngobukhulu bokubonisa kanye nenhloso yokumaketha nokubeka uphawu kukaMongameli Obama. Kukhona ukuqhathanisa okwehluke kakhulu kukaBush kuqhathaniswa no-Obama kanye neRiphabliki kanye neDemocrat okufanele ukhulume ngakho kubhulogi lokumaketha, noma kunjalo.
Chofoza ukuze uvule ividiyo Iconography noMongameli Obama:
Ngingakuthokozela kakhulu uma ungangangishisanga ngokubeka lokhu (njengoba kwenza abaningi ngenkathi ngenza i- U-Obama Vista okuthunyelwe). Ipolitiki ihlale ilukhuni ukukhuluma ngayo kepha ukusetshenziswa okwehlukile kokufaka uphawu lokumaka uphawu lwezithombe, ukumaketha ngomkhankaso ka-Obama kanye noMongameli u-Obama White House kwaba futhi ayikho into emfushane ngokumangazayo.
Umbuzo owodwa uthi ngabe lolu wuphawu oluhle lokuthi uqhubeke nokucindezela ngaphansi kukaMongameli kaBarack Obama? Ngokwami, ngicabanga ukuthi kuyindlela ephephe kakhulu yeDemocratic National Party. Njengoba uphawu luka-Obama lunamandla kakhulu kunomkhiqizo we-DNC, noma iyiphi impumelelo ingabiwa kepha noma yikuphi ukwehla kungabuyiselwa emuva kulowo mkhiqizo. Ngingathanda ukuba nemicabango yakho!
Tags: i-barack obamaamademokhrasidesignisithonjanaiconsObamaizithonjana zezombusazweezombusazwe
Ukuletha i-Enterprise Analytics ku-WordPress
I-Marketing Blog Ukuthandwa nokungathandwa